Boqorka Sacuudi Carabiya oo isbitaal la dhigay kadib - Caasimada Online
Home Dunida Boqorka Sacuudi Carabiya oo isbitaal la dhigay kadib
Boqorka Sacuudi Carabiya oo isbitaal la dhigay kadib
Jeddah (Caasimada Online) – Boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada ku taalla badda cas ee Jeddah.
Boqorka ayaa lagu sameyn doonaa baaritaanno caafimaad, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga Axaddii.
Wakaaladda wararka dowladda Sacuudiga ayaa soo xiganeysay bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada, waxaana warku wuxuu intaa ku daray in uu baaritaan ku marayo cisbitaalka takhasuska ee Boqor Faysal.
Boqortooyada Sacuudiga illaa iyo hadda ma bixin faah faahin kale oo dheeri ah, sida ay warisay wakaaladda ee dowladda.
Boqor Salmaan, ayaa noqday hoggaamiyaha dalka ugu sareeya dhoofinta saliidda adduunka sanadkii 2015 kadib markii uu in ka badan 2-1/2 sano ku qaatay xilka dhaxal sugaha iyo ra’iisul wasaare ku xigeenka.
Boqorka, oo 86 jir ah, ayaa qalliin looga sameeyay xameetida sanadkii 2020-kii, isaga oo sidoo kale galay qalliin dhanka wadnaha ah bishii Maarso.